के तपाइँ फौजदारी को सामना गर्दै हुनुहुन्छ?
वाशिंगटन Homeownership संसाधन केन्द्र वाशिंगटन को आधिकारिक homeownership हटलाइन संचालित र यहाँ यो कठिन समय को माध्यम बाट मार्गदर्शन गर्न को लागी छ।
फौजदारी प्रक्रिया भारी हुन सक्छ, तर तपाइँ एक्लै हुनुहुन्न। त्यहाँ कदमहरु छन् कि तपाइँ आज लिन सक्नुहुन्छ कि फौजदारी रोक्न मद्दत गर्न सक्छ र तपाइँ तपाइँको घर राख्न को लागी अनुमति दिन सक्नुहुन्छ।
वाशिंगटन Homeownership संसाधन केन्द्र (WHRC) यस चुनौतीपूर्ण समयमा घर मालिकहरु लाई समर्थन गर्न को लागी तपाइँ तपाइँको अधिकार, पहुँच संसाधन र उपकरणहरु लाई बुझ्न, र सहायता मा हात प्रदान गर्ने वकिलहरु संग जोड्न को लागी प्रतिबद्ध छ। फौजदारी रोकथाम मद्दत मुक्त छ जब यो घर मा बस्ने बारे मा छ। त्यहाँ लगानी वा छुट्टी घरहरुमा फौजदारी मद्दत को लागी एक शुल्क हुन सक्छ।
हामीलाई आज एक विशेषज्ञ संग कुरा गर्न को लागी कल गर्नुहोस् जो तपाइँ तपाइँको स्थिति को लागी अनुकूलित संसाधनहरु संग प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ।
वाशिंगटन राज्य मा, तपाइँ फौजदारी निष्पक्षता अधिनियम (FFA) को माध्यम बाट अधिकार छ - फोरक्लोजर प्रक्रिया को बारे मा अधिक जान्न को लागी यो छोटो भिडियो हेर्नुहोस् र कसरी FFA तपाइँ लाई सुरक्षा गर्दछ। त्यसपछि, हाम्रो हटलाइन कल गर्नुहोस्।
के तपाइँलाई अब मद्दत चाहिन्छ? हाम्रो अनलाइन पोर्टल वा हटलाइन नम्बर हामीलाई सम्पर्क गर्न को लागी प्रयोग गर्नुहोस्।
नि: शुल्क व्याख्या सेवाहरु २२० भन्दा बढी भाषाहरुमा फोन बाट उपलब्ध छन्।
वाशिंगटन फौजदारी रोकथाम संसाधन गाइड व्यावहारिक उपकरण, जानकारी र संसाधनहरु घर मालिकहरुलाई फौजदारी मुद्दाहरु संग काम गर्न मद्दत गर्न को लागी प्रदान गर्दछ।
गाइड डाउनलोड गर्नुहोस्
बारम्बार सोधिएको फौजदारी प्रश्नहरु
अधिक जान्न को लागी प्रत्येक प्रश्न मा क्लिक गर्नुहोस्।
म अब मेरो धितो भुक्तानी गर्न सक्दिन। म के आशा गर्नुपर्छ?
वाशिंगटन मा फौजदारी फौजदारी निष्पक्षता अधिनियम (FFA) द्वारा शासित छ। यस अधिनियम अन्तर्गत, loanण servicers एक घर मा फोरक्लोज गर्न सक्नु अघि एक विशिष्ट टाइमलाइन मा घर मालिकहरुलाई तीन नोटिस पठाउनु पर्छ। नोटिस पूर्व फौजदारी विकल्प को नोटिस, डिफल्ट को नोटिस, र ट्रस्टी को बिक्री को नोटिस हो। मकान मालिकहरु को प्रक्रिया मा बिभिन्न बिन्दुहरुमा केहि अधिकार छ, आफ्नो loanण servicer संग भेट्न को लागी गैर फौजदारी विकल्पहरु लाई छलफल गर्ने अधिकार र उनीहरुको loanण servicer संग मध्यस्थता गर्ने अधिकार सहित। WHRC को Homeownership हटलाइन मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ तपाइँ बुझ्न को लागी तपाइँ प्रक्रियामा हुनुहुन्छ र कुन अधिकार तपाइँ को लागी उपलब्ध छ। तपाइँको आवास सल्लाहकार वा कानूनी सहायता वकीलले तपाइँलाई तपाइँको अधिकार को उपयोग गर्न मा मद्दत गर्दछ।
वाशिंगटन Homeownership संसाधन केन्द्र को सेवा गर्दछ?
वाशिंगटन Homeownership संसाधन केन्द्र (WHRC) सेवाहरु वाशिंगटन राज्य मा कुनै पनी घर मालिक को लागी नि: शुल्क उपलब्ध छ उनीहरुको बंधक, सम्पत्ति कर, वा HOA बकाया संग सम्बन्धित फौजदारी को खतरा मा। हामी वाशिंगटन राज्य को बासिन्दाहरु लाई जो घर खरीद, पुनर्वित्त, रिवर्स बंधक, वा मरम्मत सहायता संग सम्बन्धित प्रश्नहरु लाई मद्दत गर्दछौं।
WHRC लाई मेरो लागी के गर्न सक्छ?
जब तपाइँ WHRC लाई फोन गर्नुहुन्छ, एक सेवन र रेफरल विशेषज्ञ तपाइँ तपाइँको स्थिति र तपाइँको बंधक को बारे मा प्रश्न सोध्नुहुनेछ। तपाइँको स्थान र विशिष्ट आवश्यकताहरु को आधार मा, विशेषज्ञ तपाइँलाई उचित परामर्श, कानूनी सहायता, र/वा सरकारी एजेन्सीहरु लाई सन्दर्भ गर्नुहुनेछ। यदि तपाइँ तपाइँको nderणदाता बाट कुनै फौजदारी सम्बन्धी सूचना प्राप्त भएको छ, विशेषज्ञले तपाइँलाई कारबाही गर्न र उचित प्रतिक्रिया दिन मद्दत गर्दछ।
आवास सल्लाहकारहरु के हुन् र उनीहरु कसरी मद्दत गर्छन्?
आवास र शहरी विकास विभाग (HUD) घर मालिकहरुलाई फौजदारी बाट बच्न सहयोग गर्न को लागी देश भर मा आवास परामर्श एजेन्सीहरु लाई प्रायोजित गर्दछ। आवास सल्लाहकारहरु विशेषज्ञ हुन् जो तपाइँको पक्ष मा छन् र जो फोरक्लोजर प्रक्रिया को माध्यम बाट तपाइँ हिड्नु हुनेछ र कदमहरु तपाइँ फौजदारी रोक्न को लागी आवश्यक छ। केहि आवास परामर्श एजेन्सीहरु को आवश्यकता छ कि तपाइँ एक परामर्शदाता संग बैठक गर्नु भन्दा पहिले एक कक्षा लिनुहोस् र सबै एक सेवन प्याकेट को पूरा को आवश्यकता छ। एक सल्लाहकार तपाइँको घर को बजेट को समीक्षा, तपाइँ एक संकट बजेट को विकास मा मद्दत, यदि आवश्यक छ, र तपाइँ बुझ्न को लागी विकल्पहरु तपाइँलाई फौजदारी बाट बच्न को लागी उपलब्ध हुन सक्छ। सल्लाहकार तपाइँ तपाइँको loanण servicer संग कुराकानी गर्न र एक andण परिमार्जन को लागी एक पूर्ण र सही आवेदन संग प्रस्तुत गर्न मा मद्दत गर्दछ, यदि त्यो विकल्प तपाइँ निर्धारण गर्नुहुन्छ तपाइँको लागी सबै भन्दा राम्रो छ। घर मालिक जो एक Cण परिमार्जन को लागी आवेदन गर्न को लागी एक हाउसिंग काउन्सेलर संग काम गरीरहेछन् उनीहरुको आफ्नै मा मात्र १२१TP1T बनाम 86% को सफलता दर छ।
के यो एक आवास सल्लाहकार संग काम गर्न पैसा खर्च हुन्छ?
एक HUD- अनुमोदित परामर्श एजेन्सी बाट फौजदारी रोकथाम परामर्श सधैं स्वतन्त्र छ जब यो घर मा बस्ने घर को बारे मा छ। यदि तपाइँ एक छुट्टी घर वा लगानी सम्पत्ति संग सम्बन्धित परामर्श खोज्नुहुन्छ, त्यहाँ परामर्श को लागी एक शुल्क हुन सक्छ। यदि तपाइँ एक कम्पनी द्वारा अनुरोध गरिएको छ कि तपाइँको बंधक परिमार्जन गर्न वा एक अग्रिम शुल्क को लागी अन्य फौजदारी रोकथाम सहायता प्रदान गर्न को लागी दावी गर्दछ, यो एक घोटाला हुन सक्छ। केहि हस्ताक्षर नगर्नुहोस्! हाम्रो हटलाइन कल र एक HUD- अनुमोदित आवास परामर्श एजेन्सी मा एक वैध आवास सल्लाहकार संग जोडिएको। हामी तपाइँलाई उपयुक्त अधिकारीहरुलाई फौजदारी रोकथाम घोटाला रिपोर्ट गर्न मद्दत गर्न सक्छौं।
के म एकै पटक एक भन्दा बढी आवास सल्लाहकार संग काम गर्न सक्छु?
एक पटक तपाइँ एक आवास परामर्श एजेन्सी संग काम गर्न को लागी छनौट गर्नुभयो, हामी सिफारिश गर्दछौं कि तपाइँ मात्र उनीहरु संग काम गर्नुहोस्। फौजदारी एक लामो प्रक्रिया हो र तपाइँको loanण servicer संग संचार को धेरै राउन्ड को आवश्यकता हुन सक्छ। यो तपाइँ र तपाइँको सल्लाहकार को लागी सजिलो हुनेछ यदि तपाइँ एक साथ प्रक्रिया ट्रयाक गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। थप रूपमा, त्यहाँ वाशिंगटन मा आवास सल्लाहकारहरु को एक सीमित संख्या हो, त्यसैले एक भन्दा बढि सल्लाहकार संग काम गरीरहेको छ कि अर्को homeowner लाई मद्दत गर्न जाँदैछ।
म कुनै परामर्श एजेन्सीहरु संग एक क्षेत्रमा बस्छु। मेरो विकल्प के हो?
HUD- अनुमोदित आवास परामर्श एजेन्सीहरु को धेरै राज्यव्यापी homeowners सेवा र एक विशिष्ट क्षेत्रमा सीमित छैन। आवास परामर्श र कागजी कार्य को पूरा अनलाइन, फ्याक्स द्वारा, वा फोन मा गर्न सकिन्छ यदि तपाइँ व्यक्ति मा भेट्न सक्षम हुनुहुन्न। हामी तपाइँलाई मद्दत को लागी एक आवास सल्लाहकार संग काम गर्न को लागी भले ही तपाइँ अनलाइन वा फोन बाट गर्न को लागी प्रोत्साहित गर्दछौं। कोभिड को कारण, लगभग सबै एजेन्सीहरु लाई अनलाइन वा फोन बाट यस समयमा आफ्नो सेवाहरु लाई सीमित गर्दै छन्।
म कसरी पक्का हुन सक्छु कि म एक वैध आवास परामर्श एजेन्सी संग काम गरीरहेको छु?
सुनिश्चित गर्न को लागी तपाइँ एक HUD- अनुमोदित परामर्श एजेन्सी संग काम गरीरहनुभएको छ, WHRC Homeownership हटलाइन लाई एक अनुमोदित सल्लाहकार संग जोडिएको फोन गर्नुहोस् वा तपाइँको आवास सल्लाहकार लाई सोध्नुहोस् यदि उनीहरु संयुक्त राज्य अमेरिका को आवास र शहरी विकास विभाग (HUD) द्वारा अनुमोदित छन् र प्रमाणित जानकारी अनलाइन। यदि तपाइँ एक घोटाला शंका, तपाइँ लाई सम्पर्क गर्नु पर्छ वाशिंगटन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय 1.800.551.4636 मा उपभोक्ता सुरक्षा लाइन वा www.atg.wa.gov मा उनको वेबसाइट मा जानुहोस्। तपाइँ पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ संघीय व्यापार आयोग 1.877.382.4357 मा
म कसरी एक फौजदारी रोकथाम घोटाला चिन्न सक्छु?
आवास परामर्श एजेन्सीहरु लाई तपाइँ आफ्नो सेवाहरु को लागी शुल्क लिनुहुन्न यदि तपाइँ घरमा बस्नु भएको घर मा फौजदारी सामना गरीरहनु भएको छ। कुनैपनि संगठन जसले तपाइँलाई सम्पर्क गर्दछ र तपाइँलाई नयाँ धितो दिने वाचा गर्दछ, अग्रिम शुल्क लिन्छ, तपाइँलाई तपाइँको धितो तिर्न बन्द गर्न वा कुरा गर्न बन्द गर्न सल्लाह दिन्छ। तपाइँको धितो कम्पनी, र/वा राज्य को बाहिर बाट कल सम्भवतः धेरै राम्रो हुन को लागी राम्रो छ। यी कम्पनीहरु टेलिभिजन र इन्टरनेट विज्ञापनहरु को रूप मा व्यक्तिगत अनुरोध मा पूर्वनिर्धारित मा homeowners लक्षित को उपयोग। यदि तपाइँ एक घोटाला शंका, तपाइँ लाई सम्पर्क गर्नु पर्छ वाशिंगटन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय 1.800.551.4636 मा उपभोक्ता सुरक्षा लाइन वा www.atg.wa.gov मा उनको वेबसाइट मा जानुहोस्। तपाइँ पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ संघीय व्यापार आयोग 1.877.382.4357 मा। WHRC को हटलाइन कर्मचारीहरु तपाइँ घोटालाहरु को रिपोर्ट गर्न को लागी अतिरिक्त संसाधनहरु संग जोड्न मा मद्दत को लागी उपलब्ध छन्। यदि तपाइँ पहिले नै एक घोटाला को शिकार हुनुभएको छ, हटलाइन लाई तुरुन्तै कल गर्नुहोस्।
म मेरो भुक्तानी मा पछाडि छु र मेरो बैंक बाट एक सूचना प्राप्त। म के गरूँ?
सबैभन्दा राम्रो कार्य तपाइँ एक सूचना प्राप्त गरे पछि लिन सक्नुहुन्छ WHRC हटलाइन मा कल गर्नुहोस् र हामीलाई तपाइँ एक आवास सल्लाहकार वा कानूनी सहायता वकील संग जोड्नुहोस्। त्यहाँ तीन आवश्यक सूचनाहरु छन्, तर तपाइँ अन्य सूचनाहरु पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ घरमा बस्नुहुन्छ, तपाइँसँग केहि अधिकारहरु छन् र ती तपाइँले प्राप्त गर्नुभएको सूचनाको आधारमा फरक फरक हुन्छन्। यो हटलाइन स्टाफ को लागी उपयोगी हुन सक्छ यदि तपाइँ जान्दछन् कि तपाइँ कुन सूचना प्राप्त गर्नुभयो जब तपाइँ हामीलाई कल गर्नुहुन्छ।
तीन कानूनी रूपमा आवश्यक सूचनाहरु हुन्:
पूर्व फौजदारी विकल्प को सूचना
ट्रस्टी को बिक्री को सूचना
फौजदारी प्रक्रिया को दौरान, चाहे तपाइँ एक सल्लाहकार संग वा तपाइँको आफ्नै मा काम गर्नुहुन्छ, तपाइँ प्रत्येक सूचना वा संचार तपाइँ तपाइँको बैंक बाट प्राप्त गर्नु पर्छ। यदि तपाइँ एक सल्लाहकार संग काम गरीरहनुभएको छ, तपाइँ तपाइँको सल्लाहकार संग तपाइँको बैंक बाट कुनै पनि संचार साझा गर्नु पर्छ, त्यसैले उनीहरु के गर्न को लागी तपाइँलाई सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ।
मैले मेरो nderणदाता बाट पूर्व फौजदारी विकल्प को एक सूचना प्राप्त गरेको छु। यसको मतलब के हो र मेरो विकल्प के हो?
वाशिंगटन राज्य मा, (NOPFO) तीन नोटिस को पहिलो तपाइँको loanण servicer तपाइँ पठाउन को लागी तपाइँ एक बंधक भुक्तानी मिस गर्न को लागी आवश्यक छ। तपाइँ तपाइँको nderणदाता बाट अन्य सूचनाहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँ एक भुक्तानी छुटेको संकेत पाउन सक्नुहुन्छ, तर NOPFO सधैं वाक्यांश "homeowners को लागी महत्वपूर्ण अधिकार" लाई सामेल गर्दछ। यो नोटिस तपाइँ तपाइँको nderणदाता संग एक व्यक्ति मा वा फोन बैठक को लागी तपाइँको अधिकार को बारे मा सूचित गर्दछ, "मिल्नुहोस् र कन्फर गर्नुहोस्," छुटेको भुक्तानी (हरू) र तपाइँको विकल्प को बारे मा। तपाइँ NOPFO लाई जवाफ दिन को लागी मिति बाट ३० क्यालेन्डर दिन को लागी बैठक मा अनुरोध गर्न को लागी अनुरोध गर्दछौं र हामी प्रमाणित मेल द्वारा त्यसो गर्न को लागी सिफारिश गर्दछौं ताकि तपाइँ यसको पठाउने मिति र रसीद को प्रमाण छ। यदि तपाइँ समय मा प्रतिक्रिया दिनुभयो भने, बैंक तपाइँ संग भेट्नु पर्छ र NOPFO को मिति बाट days ० दिन पर्खनु पर्छ डिफल्ट को एक नोटिस पोस्ट गर्नु अघि, जो अर्को आवश्यक सूचना हो। यदि तपाइँ प्रतिक्रिया नदिने छनौट गर्नुहुन्छ, nderणदाता NOPFO मा मिति पछि ३० दिन पछि डिफल्ट को नोटिस जारी गर्न सक्नुहुन्छ। हामी अत्यधिक सिफारिश गर्दछौं कि तपाइँ एक सल्लाहकार संग काम र तपाइँको loanण servicer संग बैठक को समयमा उनीहरु संग तपाइँको साथ छ। WHRC हटलाइन लाई अधिक जान्न को लागी सम्पर्क गर्नुहोस् र/वा एक आवास सल्लाहकार संग जोडिएको।
म कसरी पूर्व फौजदारी विकल्प को सूचना को प्रतिक्रिया दिन्छु?
तपाइँ प्रमाणित मेल द्वारा पूर्व फौजदारी विकल्प को सूचना को प्रतिक्रिया दिनु पर्छ र फिर्ता हरियो रसीद कि showsणदाता तपाइँको अनुरोध प्राप्त भएको छ देखाउँछ। तपाइँको loanण नम्बर, मिति तपाइँ सूचना प्राप्त, र या त तपाइँको काउन्टी मा एक व्यक्तिगत बैठक वा तपाइँको nderणदाता संग टेलिफोन को माध्यम बाट एक बैठक अनुरोध गर्नुहोस्। पूर्व फौजदारी विकल्प को सूचना एक ठेगाना जसमा तपाइँ प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाइँ बैठक को अनुरोध को लागी यो टेम्पलेट को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ:
"एक बैठक र सम्मेलन को लागी अनुरोध" पत्र
यदि मैले पूर्वनिर्धारित सूचना प्राप्त गरेँ भने मैले के गर्नुपर्छ?
यदि तपाइँ एक प्राप्त गर्नुहुन्छ (NOD), तुरुन्तै Homeownership हटलाइन सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाइँ डिफल्ट को सूचना मा मिति देखि 20 दिन सम्म ट्रस्टी बिक्री को नोटिस मा मिति पछि तपाइँको तर्फ बाट एक आवास सल्लाहकार वा वकील अनुरोध मध्यस्थता गर्न को लागी छ। किनकि तपाइँ तपाइँको आफ्नै मा मध्यस्थता को अनुरोध गर्न सक्नुहुन्न, यो महत्वपूर्ण छ कि तपाइँ या त एक आवास सल्लाहकार वा वकील संग जोडिएको छ छिटो। चाँडै तपाइँ डिफल्ट को तपाइँको नोटिस को बारे मा हटलाइन सम्पर्क, अधिक समय तपाइँ एक मध्यस्थता अनुरोध को लागी आवश्यक कागजी कार्य पूरा गर्न को लागी छ। थप रूपमा, यदि तपाइँ ट्रस्टी को बिक्री को नोटिस जारी हुनु भन्दा पहिले मध्यस्थता को अनुरोध छ, फौजदारी समयरेखा बन्द हुन्छ जब तपाइँ तपाइँको nderणदाता संग मध्यस्थता मा भाग लिनुहुन्छ।
यदि मैले ट्रस्टीको बिक्री को सूचना प्राप्त गरेँ भने मैले के गर्नु पर्छ?
(NOTS) फौजदारी प्रक्रिया मा तेस्रो र अन्तिम सूचना हो। यो सूचना सार्वजनिक रूप मा तपाइँको काउन्टी मा रेकर्ड गरीएको छ र मिति जसमा ट्रस्टी लिलामी मा तपाइँको घर बेच्ने छ यदि तपाइँको स्थिति पहिले समाधान भैसकेको छैन। FFA को आवश्यकता छ कि लिलामी मिति NOTS मा रेकर्डि date मिति बाट १२० दिन भन्दा छिटो छैन।
यदि तपाइँ ट्रस्टी को बिक्री (NOTS) को एक सूचना प्राप्त गर्नुहुन्छ, घर मालिकाना हटलाइन लाई तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईं 20 दिन ट्रस्टी को बिक्री को नोटिस मा एक रेकर्डि date मिति पछि तपाइँको तर्फ बाट एक आवास सल्लाहकार वा वकील अनुरोध मध्यस्थता गर्न को लागी छ। किनकि तपाइँ तपाइँको आफ्नै मा मध्यस्थता अनुरोध गर्न सक्नुहुन्न, यो महत्वपूर्ण छ कि तपाइँ या त एक आवास सल्लाहकार वा वकील संग जोडिएको छ। चाँडै तपाइँ ट्रस्टी को बिक्री को तपाइँको नोटिस को बारे मा हटलाइन सम्पर्क, अधिक समय तपाइँ एक मध्यस्थता अनुरोध को लागी आवश्यक कागजी कार्य पूरा गर्न को लागी छ।
मध्यस्थता भनेको के हो?
मध्यस्थता प्रक्रिया हो जहाँ घर मालिकहरु, धितो कम्पनी बाट एक प्रतिनिधि (लाभार्थी को रूप मा पनि जानिन्छ), एक आवास सल्लाहकार वा वकील, र एक प्रशिक्षित मध्यस्थ फौजदारी को विकल्प मा छलफल। यो फौजदारी रोक्न एक शक्तिशाली उपकरण हो। एक मध्यस्थले लाभार्थीलाई घरको मालिकको पक्षमा एउटा संकल्पमा पुग्न आदेश दिन सक्दैन, तर उनीहरुलाई दुबै पक्षलाई एक सम्झौतामा पुग्न मद्दत गर्न प्रशिक्षित गरिन्छ। मध्यस्थता ग्यारेन्टी गर्दैन कि homeowner एक loanण परिमार्जन वा अन्य अनुकूल परिणाम प्राप्त हुनेछ, तर फौजदारी निष्पक्षता अधिनियम घर मालिक र लाभार्थी राम्रो विश्वास मा भाग लिन को लागी आवश्यक छ र धेरै homeowners मध्यस्थता को प्रक्रिया को परिणाम को रूप मा आफ्नो घर कायम राख्न सक्षम छन्।
म कसरी मेरो धितो संग सम्बन्धित सार्वजनिक रूप बाट रेकर्ड गरिएका कागजातहरु पहुँच गर्न सक्छु?
तपाइँ काउन्टी रेकर्डरको कार्यालय मा कर्म, धितो कागजात, liens, सूचना, उपविभाग, र घर जग्गा अनुबंध पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ। काउन्टी र कागजात मा निर्भर गर्दछ, तपाइँ उनीहरुलाई अनलाइन खोज्न सक्षम हुन सक्नुहुन्छ।
म कसरी जाँच गर्न सक्छु कि फैनी माई वा फ्रेडी म्याक मेरो धितो को मालिक हो?
यदि फन्नी माई वा फ्रेडी म्याक तपाइँको बंधक को मालिक हो हेर्न को लागी निम्न लुकअप उपकरणहरु को उपयोग गर्नुहोस्:
Fannie Mae anण माथि हेर्नुहोस्
फ्रेडी म्याक anण हेर्नुहोस्
मँ मेरो बैंक वा वित्तीय संस्था विरुद्ध एक औपचारिक उजुरी कहाँ दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाइँ निम्न सूची बाट तपाइँको बैंक वा वित्तीय संस्थाहरु विरुद्ध एक उजुरी फाइल गर्न सक्नुहुन्छ:
संघीय निक्षेप बीमा निगम, उपभोक्ता प्रतिक्रिया केन्द्र (FDIC): 877.275.3342 (संचालन को समय: 8:00 am -8: 00 pm पूर्वी समय)
मुद्रा को नियंत्रक को कार्यालय
संघीय व्यापार आयोग, वित्तीय अभ्यास को प्रभाग
वाशिंगटन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय
वाशि Washington्टन राज्य वित्तीय संस्थाहरुको विभाग उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्यूरो - हटलाइन: 1.855.411.CFPB (2372)